I-Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder (360-70-3) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Nandrolone powder Series / Nandrolone Decanoate (DECA) powder
SKU: 360-70-3. iindidi: I-Nandrolone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Nandrolone Decanoate (DECA) ividiyo ye powder
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA)
igama: I-Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder
I-molecular Formula: C28H44O3
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) yokusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
I-DECA i-Raw Names Names
I-Nandrolone Decanoate powder / DECA powder nayo iyazi njenge-DECA i-powder durabolin, i-DUrabol, i-DECA ipowder.
FUNDA i powder eluhlaza, mhlawumbi i-anabolic steroid eyaziwayo yesibini eyaziwayo emva kwe testosterone. Kubonakala ukuba phantse yonke i-novice ye-steroid kunye nabaninzi abanamava nge-steroid iikholeji bakholelwa ukuba iziphumo ezingcono zifuna ukuba zibandakanye i-DECA powder eluhlaza. Nangona kunjalo, eqinisweni eli qela alikho izakhiwo ezikhethekileyo ze-anabolic: ezinye i-steroids ezingenayo inokwenza konke ukukhula kwemisipha e-DECA powder.
I-Raw Nandrolone Decanoate (DECA) Ukusetyenziswa kwePowder
Kubafazi, i-50-100mg ngeveki icetyiswa, kumadoda, i-100-200mg ngeveki icetyiswa.
Ukuqhubela phambili, apho abagijimi baneengxaki ezidibeneyo, kwiimeko ezininzi zisebenzisa i-DECA powder kumjikelezo we-steroid unempembelelo embi yokubonelela ngoncedo. Ngaphandle kwezilwanyana eziphantsi nje nge-100 mg / iveki inokwaneleyo ngokwale njongo kwiimeko ezininzi.
Omnye we-anabolic steroids efunyenwe kakhulu kwiimarike ukuya kutsho; FUNDA i powder eluhlaza Durabolin wenze igama ngokwalo. Ukudibanisa kwi-DECA enkulu powdernoate ester, DECA i-powder Durabolin yenziwe nge-hormone yeNandrolone steroid. Kuphakathi kwe-anabolic steroids esetyenziswa kakhulu phakathi kwabadlali abafuna ukuphucula ukusebenza kwabo. Ukubonelela ngeenzuzo ezingenakunqwenelekayo ngexesha lexesha elifanelekileyo, liyakuthandwa inxalenye yokuba luncedo lwezonyango. Ngeminyaka yokuphikisana kwama-anabolic steroid, iimpembelelo ezichaphazelekayo ze-DECA i-powder Durabolin ziye zaphazamiseka ngenxa yokoyika kunye nexhala malunga nezinto ezifana 'nentukuthelo.' Oku kuyingxenye ngenxa yokuxhamla kwi-hormone ye-hormone testosterone kunye neengcamango ezingafaniyo ezikhoyo malunga nento enokuyenza.
I-Nandrolone (i-hormone ye-steroid eyenza i-DECA i-powder powder Durabolin) yokuqala yabonakala kwi-1960 ngenjongo yokusetyenziswa kwezorhwebo. Beka phantsi kwegama loshishino DECA i-powder eluhlaza Durabolin, iye yahamba ngeenguqu ezininzi kunye nezihlandlo zokulungisa kwakhona ixesha elide. Nangona kunjalo, i-DECA i-powder Durabolin isala igama elibalaseleyo le nkunkuma ngaphandle kwayo. Ngenxa yokwesaba malunga nento enokuyenza, i-US inokufikelela kumda kwisiza. Nangona kunjalo, i-DECA i-powder uDurabolin isala nanamhlanje unyango oluthandwayo oluthandwayo kwizinto ezininzi ezinokukunceda.
Isilumkiso kwi-Raw Nandrolone Decanoate powder
Abasetyhini kufuneka babonakale iimpawu zokuhlengahlengiswa, njengokujulisa kwezwi, i-acne, izitenxo zokuya esikhathini. Ngexesha lobubungqina be-virilism elula, ukukhusela ukuguqulwa okungenakuphikiswa, ukuyeka ukunyanga kweyeza kufuneka.
I-DECA i-powder Ukusetyenziswa kwe-Durabolin ngokuqhelekileyo kunempembelelo echaphazelekayo yokuphazamisa ukuveliswa kwemveliso ye-testosterone yemvelo emva komjikelezo we-steroid. Isiphumo sempembelelo engalunganga kwi-libido kunye / okanye umsebenzi we-erectile uqhelekileyo, kodwa ngokuqhelekileyo kuphela xa i-200-400 mg / iveki okanye xa isilwanyana sisetyenziselwa yedwa nayiphi na i dose efanelekileyo. Iingxaki zibi nakakhulu xa i-DECA i-powder eluhlaza ingabandakanywa kunye ne-testosterone okanye amaninzi amachiza e-androgenic njenge-trenbolone, i-Masteron okanye i-Dianabol. Kukho ukuhlukahluka komntu ngamnye ekuphenduleni ngokubhekiselele kwimiphumo emibi kwi-libido kunye nomsebenzi we-erectile. Ukuxinezeleka kwengqondo kunokwenzeka.
I-Raw Nandrolone Decanoate powder Imiyalelo eyongezelelweyo
Inkunkuma ye-Nandrolone Nandrolone Decanoate (DECA) i-powder injection isetyenziswe kuphela kwisilenze esicinci se-intramuscular, ngokukhethekileyo kwi-stuteal muscle. Ukusetyenziswa kufuneka kusekelwe kwimpendulo yokwelapha kunye nokuqwalasela umngcipheko. I-Nandrolone Decanoate powder / DECA powder kufuneka ithathwe njengonyango oluthileyo kwaye lwanele, kwaye ukuba kunokwenzeka, unyango lufanele lube luphakathi.
Inzuzo eyongeziweyo ye-DECA i-powder Durabolin (nandrolone) kukuba le ngqungquthela ilungile ngokwemiphumo emibi kwi-scalp kunye nesikhumba. Oku kungenxa yokuba izenzo ze-5-alpha zokunciphisa i-enzyme zenza ukunciphisa amandla e-nandrolone, ngoxa ngokungafani nezinye i-anabolic steroids ayinakuchaphazeleka ngolu hlobo lwe-enzyme, kwaye ubukhulu be-testosterone buyenyuka kakhulu.
I-DECA ye powder powder
Eyona mkhulu kakhulu kune-testosterone efanelekileyo, DECA powder Durabolin powder eluhlaza unesilinganiselo esiphezulu se-anabolic. Nangona kunjalo, ukulinganiswa kwe-androgenic jikelele ye-DECA i-powder eluhlaza iDurabolin yi-37 kuphela (i-testosterone yi-100.) Ukunciphisa iDHN okanye i-dihydronandrolone, DECA i powder eluhlaza i-Durabolin isabela ngokukhawuleza kwaye ilula ngokulula ukunyamezela i-anabolic steroids ngaphandle apho. Ihlawulwa yimpumelelo yayo kwinxalenye yomsebenzi wayo we-estrogenic. Ngoxa i-DECA i-powder Durabolin ingenza i-blood aromatize egazini, yenza njalo kwi-20% efana ne-testosterone. Qaphela ukuba nangona kunjalo, usenokufuna ukuba uqaphele ukuba uphando lwalo lweprogestin.
I-DECA yokurhweba yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-Nandrolone Decanoate powder; bathenge i-DECA powder evela kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 99% Nandrolone Decanoate / DECA i powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iibhanki zangaphantsi zokusetyenziswa kwegciwane. .
10g DECA i-powder Powder
17.5ml i-Ethyl Oleate (EO)
I-16ml i-Oil Grapeed (GSO)
12g DECA i-powder Powder